HS:-Warar xaqiiqada u dhaw oo aanu ka heleyno caasimada Gobolka Galgadud ee Dhuuso Mareeb ayaa sheegaya in ay u badan tahay hadii aysan odoyaasha ku sugan Dhuuso Mareeb la IMAAN AQLI ka duwan midka hada ka muuqato waxey isku furidoonaan wado ay adkaan doonto si ay u soo xiraan.
Hada dhismaha maamulka aad ayuu u fudud yahay hadeysan Jufa da hada Martida loogu yahay Dhuuso Mareeb joojin magaalada Cadaado oo horey loo iclaamiyay inuu ka furmayo shirka tegi meyno beritona kuwa Cadaado waxey leeyahiin inaguna tegi meyno Dhuuso Mareeb sidaasina waxaa kubilaaban doona Naceb iyo colaad dhex Marta hal qoys oo ay hada u aamusan yahiin beelahii kale.
Warar KII ugu danbeeyey ee aanu ka heleyno Galgaduud ayaa sheegaya in shirka maamul goboleed sidii uu horey ugu qorsheysnaa loogu qaban doono magaalada Cadaado ninka maanta leh maamul goboleed ayaa bulshada Mudug iyo Galgadud loo dhisayaa magaalo Galgaduud ku taalona leh matagayo waa yaan maamul la dhisin yuusan bulshada dhihin dib u heshiisiin ayaan wadaa waayo wey iska cadahay in aan dan guud la wadinayuu yiri mid ka mid ah beelahii kale ee aan Habar Gidirta aheyn .
Waxey u badan tahay inta uu madaxweynaha joogo deegaanka in xalka laga abaari doono si uu markii hore ahaa ee lagu Balamay hadeysa arinta noqoto anigaa iri iyo wax la mid ah,Cadaadona waxaa inaguna ku sugan 9 beelood waxgaradkooda shakina kuma jiro in ay maamul halkaas kaka dhawaaqi doonaan sidaasna beesha Habar Gidir oo talo XUMO badan oo iyaga dhxdoodaa ku soo qabsatay meelo badan oo dalka ka mid ah iyagu isku dagaalaan Soomaalida kale ee ay horey u soo dhibaateeyeena dusha ka daawadaan.
Hada Dhuuso Mareeb Shirka ka socda waxuu u muuqdaa mid ay shaqsiyaad jahwareerinayaan Odoyaasha laakinse dhawaan waxaa la arki doonaa iyadoo la soo jeedin doono in shirka loo weeciyo Ceelbuur iyo Caabuud-Waaq midood Habar Gidirna loo arko beel aan u diyaarsaneyn maamul goboleed oo ay kooxana Guri-Ceel
Iyagoo leh Ahalusaa nala dhahaa ee sidaas wax uga hela goobta shir ka iyagoo hal qabiil ah ku tagaan 4 ilaa 5 kooxood.
Isku soo duuboo shacabka gobolada dhexe wey ku daaleen siyaasadaha noocaan ah waxaan a u rajeyneynaa mustaqbal iftiin badan iyo shirka maamul u sameynta Mud ug iyo Galgadud oo guul ku dhamaado.hadiise fursadaan bulshada laga lumiyo 50 years kedib hala sugo mid kale.
La Soco warar keenaane danbe
· admin on March 07 2015 00:59:11 · 0 Comments · 5378 Reads ·
14,613,413 unique visits